Kun tarreele ogejjii, faankishinii, mallattoo fi dirqala dhangii kan foormula keessa saagamani dha.
Foddaan filannoo kutaale lamatti hirama. Mallattoo gara gubba foddaa cuqaasuun mallattoo hirkataa foddaa walakka gadirratti agarsiisa.
Faankishinii gasa tokko baafata xixxiqqa keessa jiraan kara baafata halqara foddaa Ajajaa ga'uu dandessu.
Mul'annoo - Maalimoota Foormullaafiladhu
Mallattoolee herreega gosa garagaraa mul'isa.
Gabaatee Wabii Foormulaa
Kutaan wabii kun tarreele heedduu ogeejjii, faankishinii, mallattoole fi amala dhangeessuu LibreOffice Math keessa of keessatti qaba. Ajajootni baay'een agarsiisaman sajoo foddaa Foormulaa Maalimootaa ykn baafata halqara foddaa Ajaja keessa fayyadamuun saagamu.
Title is: Maalimaa